“Discipline “ စည်းကမ်း – Shwe Nay Chi
“Discipline “ စည်းကမ်း
မနေ့က အမေစု ရဲ့ အင်တာဗျုးလေး ပြန်ကြည့်တော့ အမျိုးသမီးတယောက်က အမေ့ကို မေးခွန်းတခု မေးပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ သီးသန့်ထားပြီး အထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ အချိန်တွေ မှာ ဘယ်လို ယုံကြည်မှု့ မျိုးထားပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်အောင် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ပါသလဲ အခု ဘဝမှာ အခက်အခဲ တွေကြုံနေရတဲ့ လူငယ်တွေကို ဘယ်လို အကြံဉာဏ်တွေများပေးချင် ပါသလဲ တဲ့။
During the many years of seclusion and isolation , How do you keep your faith and maintainaclear mind ? What will be your advice to our young generation when going through hardship in life ? တဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်းလေးနော် .. အမေ ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေကလည်း အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ သိပ်ခေတ်မစားတော့ပေမယ့် အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးလေး တလုံးနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Discipline စည်းကမ်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးပါတဲ့။
ဒီလို တယောက်ထဲ အထိန်းသိမ်းခံ ခက်ခဲတဲ့ ကာလတွေကို စည်းကမ်းရှိရှိကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဝမှာ အမြဲပဲ စည်းကမ်းရှိရှိ နေထိုင်ပါတယ် .. ယုံကြည်ချက်တွေ မပျက်စီးဖို့ စည်းကမ်းနဲ့ ထိမ်းသိမ်းပါတယ်။ ခုခေတ် လူငယ်တွေ တော်တော်များများက စည်းကမ်းကို တန်ဖိုးထားရမှန်းမသိကြဘူး။ တကယ်လို့ သာ ဒုက္ခရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကို ကယ်နိုင်တာ စည်းကမ်းရှိခြင်း ပဲ ဆိုတာကိုသာ သူတို့ သိရင် စည်းကမ်းရှိဖို့ ကို ခုထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက် တန်ဖိုးထား သင်ယူကြမှာပဲ တဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက စည်းကမ်းအကြောင်း စာစီစာကုံးတွေ ရေးခဲ့တဲ့ အခါ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးရေးသလား ဆရာတွေ ရေးပေးတာကို ကျက်ပြီးဖြေခဲ့သလား သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ခုတော့ စည်းကမ်းရှိခြင်းက ဘဝမှာ အရမ်းအရေးပါတယ်ဆိုတာ ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး သိနားလည်လာပါတယ်။
တနေ့က ပူပူနွေးနွေး မုဆိုးမ အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီး ရဲ့ လက်ရှိ ပုံဆိုတာလေးကို အင်တာနက်မှာ တွေ့လိုက်တော့ စိတ်ထဲကို အတွေးတွေ ဝင်လာပါတယ်။ ဘုရင်မကြီးက အသက် ၉၀ ကျော်နေပေမယ့် လှလှပပ ကျက်သရေ ရှိနေတာ ကို မြင်တော့ သူ့ အကြောင်း စီးရီးရိုက်ထားတဲ့ The Crown ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ကြည့်ဖြစ်တာကို ပြန်တွေးမိပါတယ်။ သူမ ဟာ ဘုရင်မ ပီပီ အတော်ကို စည်းကမ်းရှိရှိ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ် ဝတ်တာ စားတာ နေတာ ထိုင်တာ အရမ်းကို စည်းကမ်းတကျ ရှိခဲ့တယ် စိတ်ကို အလိုမလိုက် အပျင်းမကြီးပဲ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ ကို သူ့ အချိန်နဲ့ သူ လုပ်နေခဲ့တော့ အသက်ရှည် ကျန်းမာ အရွယ်တင် လှပ နုပျိုပြီး ကျက်သရေရှိနေတာပဲ လို့ တွေးနေမိတာပါ။
တဆက်ထဲ ကိုယ်တွေရဲ့ အမေစု လည်း ၇၆ နှစ် မုဆိုးမ ပေမယ့် လှပကျော့ရှင်း ကျက်သရေ ရှိတာ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ စည်းကမ်းရှိလို့ ဆိုတာ သွားမြင်ပါတယ်။ အမေစု ရဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်ရကြည့်ရရင် သူမကြီးပြင်းလာရပုံ တစိတ်တဒေသကို လည်း သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဖွားဒေါ်ခင်ကြည် စည်းကမ်းကြီးပုံကိုလည်း ဆွေမျိုးနီးစပ် တော်စပ်ကြတာမို့ အမေတို့ ကြီးကြီးတို့ ငယ်ငယ် က ပြောပြတာ ခဏခဏ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။ အမေစုဟာ ခုလို လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ခပ်မတ်မတ် ကိုယ်နေဟန်ထားကို ငယ်စဉ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။
ရာပေါင်းများစွာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရင် ဘယ်သောအခါ မှ ပျင်းတွဲနေတဲ့ ပုံနဲ့ လျော့ရိလျော့ရဲ ထိုင်နေတာ မတွေ့ရဖူးပါဘူး ခါးကို မတ်ပြီး နေတဲ့ Posture ကိုယ်နေဟန်ထားက တကယ့်ကို အမိုက်စားပါပဲ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက စာအုပ်တွေ ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါတဲ့။ ခါးမတ်ဖို့ ရယ် လုံချည်ကို ခဏခဏ ပြင်မဝတ်ရအောင် တခါတည်းနဲ့ တနေကုန်မြဲနေအောင် ဝတ်တတ်ဖို့ ကို အဖွားဒေါ်ခင်ကြည် က လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာတဲ့။ တလောက Tony Robbins ရဲ့ New World New You ဆိုတဲ့ Challenge လေးမှာ ထရိန်နင်ယူတော့မှ လူတယောက်မှာ ကိုယ်နေဟန်ထားက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ ဆိုတာ သိတော့တယ်။
ဒါကြောင့် အမေရိကန် သမ္မတ တွေ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား စကားပြောဟန်တွေအတွက် လေ့ကျင့် ပေးသူတွေ ငှားရမ်း ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ နားလည်လာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ချောတို့ ကို ကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ပေးတဲ့ သူက Brian Bradley တဲ့ သူ့ ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ tips တွေ အရမ်းကောင်းပါတယ် .. ပို့စ်သပ်သပ်ရေးပြီး ပြောပြပါအုံးမယ်နော်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ချင်တဲ့ သူတယောက်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်က စည်းကမ်းပါပဲ ။ အဲဒါကို သိသာသိပေမယ့် စည်းကမ်းရှိရှိ မနေတတ်လို့ သင်ယူလေ့ကျင့်နေရပါတယ်။ အဓိကက မပျင်းဖို့ ပါပဲ။ လူဆိုတာက သက်တောင့်သက်သာ နေချင်ကြတော့ သက်သာသလို နေရင်း ပျင်းသွားကြတယ် နဲနဲ လေး အားထုတ်မှု့ လေးနဲ့ ပြုပြင်လိုက်ရင် ဘဝဟာ ရုပ်ရည်က စလို့ ကျန်းမာရေး လူမှု့ရေး အားလုံးက အဆင်ပြေပါတယ်။
ခု ပုံလေးတွေမှာ ကြည့်ပါ အမေစုရော ဘုရင်မကြီးရော မြင်ရတာ ကျက်သရေရှိပြီး လှပ နုပျိုနေရောပဲ။ သူတို့ က ဘုရင်မမို့ အမေစုမို့ ဒီလို နေနိုင်တာပါ အိမ်အလုပ်တွေမှ မလုပ်ရပဲ လို့ တွေးမယ်မလား။ ချောလည်း အစက အဲလို တွေးဖူးတယ်
တခုခုဆို အကြောင်းပြချက်တွေ ဆင်ခြေတွေ ပေးဖို့ ကြိုးစားပြီး ကိုယ့် အပျင်းစိတ်ကို ကာကွယ်တာလေ။ တကယ်တော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်မှာ ရှိတာလေးနဲ့ သန့် သန့် ရှင်းရှင်း လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဝတ်စားပြင်ဆင် ပြီး နေနိုင်ကြပါတယ်။ အရင်ကဆို အိမ်ကို လှလှလေးထားဖို့ ဆိုရင် ပိုက်ဆံရှိမှ ပြင်ဆင်နိုင်မှာ လို့ ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်တွေ လွှင့်ပစ်ပြီး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ရှိတာလေးနဲ့ အလှဆင်လည်း ဖြစ်တယ်။
အဝတ်အစားလည်း ဒီလိုပါပဲ။ လှပ သပ်ရပ်နေအောင် ဝတ်လို့ ရတယ်။ အမေစု က အပျိုတုန်းက အကြီငျ် လေး တထည်ထားပြီး အမြဲ ဝတ်ကြည့်တယ်။ ကြပ်လာတာနဲ့ ဝိတ်လျှော့တယ်တဲ့။ အစားကို အချိန် မှန်စားတယ်။ စားသောက်တဲ့ ပမာဏကို အပြောင်းအလဲ မရှိ တသတ်မှတ်ထဲ စားတယ်။ အိပ်ချိန် ထ ချိန်ကို လည်း ပုံမှန် အိပ်တယ် ထ တယ်။ မနက် နေမထွက်ခင် ထပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် တရားထိုင်တယ် တဲ့။ ဘယ်လောက် အလုပ်များများ မပျက်မကွက် နေ့ စဉ်လုပ်တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ဝ လည်း မလာ ပိန်လည်းမသွားပဲ ဒီကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အမြဲ အရွယ်တင်နုပျိုနေတာ လို့ အားကျရတယ်။
ဘဝင်မြင့် ရမယ် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြီးမြတ်သော စိတ်ကို မွေးရင်း ခန့် ခန့် ထည်ထည် အဆင့်ရှိရှိ နေထိုင်တတ်တာဟာလည်း ကောင်းတာပါပဲ။ ချောက ဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော် မမလေးစာတွေ ဖတ်ပြီး ကြီးလာလို့ လားမသိ အဆင့်ရှိရှိ ခန့် ခန့် ထည်ထည် နေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆို အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ အဲလိုလေး ပြုပြင် ပြင်ဆင်ပြီး နေကြည့် ပါ ..
Key အဓိက သော့ချက်ကတော့ စည်းကမ်းပါပဲ
အစားအသောက် အနေအထိုင်ကို စည်းကမ်းရှိရှိလေးနဲ့ အားထုတ် နေထိုင်ကြည့်ပါ နော်။ ဘဝက နေရတာ တမျိုး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
မိတ်ကပ်ဆရာအရွေးမှားသွားခဲ့လို့ လက်ထပ်ပွဲနေ့မှာ စိတ်အလိုမကျကာ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ စုံတွဲ
တကိုယ်လုံးလှုပ်ရမ်းကာ အကြမ်းစား ကပြလိုက် တဲ့ နန်းအမရာ(VIDEO)
ပေးရင်း အဖမ်းခံခဲ့ကြတဲ့မောင်အာကာကျော် စစ်ကားနဲ့...
သားနှင့် ခင်ပွန်းသည်တို့ရဲ့ စိတ်ကြောင့် ရင်ကွဲနာကျပြီး...
မြေးငယ်လေးက်ို ကျွေးမွေးပြုစုရန် ငွေရုပ်တုအဖြစ်...
ဒေါက်တာနာဂသိန်းလှိုင်ကို ရည်စူးပြီး မင်းတပ်မြို့ရှိ...